महिलामा फेरि किन आउँछ ४० काटेपछि बैंस? यस्तो रहेछ रहस्य! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > महिलामा फेरि किन आउँछ ४० काटेपछि बैंस? यस्तो रहेछ रहस्य!
admin October 21, 2020 जीवनशैली, समाज	0
भनिन्छ नि, ‘चालिसे लागेछ बैस जागेछ ।’ यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन् । बुडापाकाका अनुसार जीवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोस्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । हाम्रो समाजमा कहिकतै महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को स’म्बन्धमा रहेको घ’टनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विवाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने भएकाे हाे ।
एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने जस्ता समस्याले अन्ततः कतिपयको स’म्बन्ध विच्छेद पनि भएको छ । विवाह पछि स’म्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर स’म्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या बिवाह पछि पनि स’म्बन्धमा रहन्छन् ।
जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !
यस्तो मृत्यु कसैको नहोस ! कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका बिष्णुकुमारको श’व बुझ्ने पनि कोही भएन